सरकार ! हामीलाई लिन प्लेन कहिले आउँछ ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सरकार ! हामीलाई लिन प्लेन कहिले आउँछ ?
सरकार ! हामीलाई लिन प्लेन कहिले आउँछ ?
म अहिले दुबईमा छु । मे महिनाको १८ तारिखमा मेरो भिसा सकियो । भिसा सकिनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै काम बन्द भयो । कोठामा बस्न थालेको दुई महिना कटिसक्यो । घर फर्कन योजना बनाएको अहिले सपना जस्तो भएको छ । कोरोना भाइरस र लक डाउनले गर्दा फर्कन पाइरहेको छैन । एयरपोर्ट खुलेको छैन ।
स्वदेश फर्कन चाहने युवायुवती धेरै छन् । यो बन्दाबन्दीले रोकिएको छ । कति युवा अलपत्र परेर बसेका छन् । एयरपोर्ट कहिले खुल्छ भन्ने आशामा छन् । कहिले पुगिन्छ भन्न थालेका छन् । यहाँ बस्ने नेपालीहरु के गर्ने कता जाने भनेर विचलित हुन थालेका छन् ।
घर जान नपाएर उनीहरु भौँतारिएका छन् । यो कोरोना र लकडाउनले दुःख दियो । रिस पनि पोखेका छन् सरकारसमक्ष । कोठामा बस्न महिनौं बितिसक्यो । घर जाने पैसा पनि सकिँदै छ । आर्थिक स्थिति पनि नाजुक हुन पुगेको छ । अब भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन नसक्ला भन्न सकिन्न । कति नेपाली विपदको समयमा अड्केर बसेका छन् । घर कहिले पुगिन्छ थाहा छैन ।
उनीहरुको मनमा निराशाको बादलले छोपेको छ । दिग्दारी र मानसिक तनाव सिर्जना भएको छ । मलाई पनि घर कहिले पुगिन्छ भन्ने आशा पनि मर्न थालेको छ । दिनानुदिन कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढेको‑बढ्यै छ । लकडाउन पनि खुलिहाल्ने अवस्था छैन । घर पनि सुख र खुसीको साथ जान पाइएन । सरकारको पहलमा हवाई सेवा छिटोभन्दा छिटो सुरु गरेर उद्धार कार्य अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
कतिको पैसा सकिएको छ । के खाने भनेर सोच्न थालिसकेका छ । सरकारले सुरक्षित रूपमा घर फर्कने व्यवस्था मिलाइदेओस् । यहाँ बस्ने कयौं नेपाली स्वदेश फर्किन नपाएर तड्पिएका छन् । कति त खानै नपाएर भोकभोकै हुनुपरेको अवस्था छ । जागिर छुट्यो । पैसा छैन । घर कसरी जाने भनेर यहाँ बस्ने नेपाली गुनासो गर्छन् ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्ने क्रममा छ । अबुधावीमा नेपाली दूतावास छ । त्यहाँ गएर पहल गर्ने भन्छन् । के गर्ने, नगर्ने यहाँ बस्ने नेपाली नै अलमल छन् । दूतावासले केही गर्छ कि भनेर आशा गरिरहन्छन् । यूएईमा रहेका प्रायः धेरै नेपाली घर फर्कन चाहेका छन् । यो कुरामा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । यूएईमा रहेका नेपाली भन्छन्‑ सरकार ! हामीलाई लिन प्लेन कहिले आउँछ ? यहाँ बस्ने नेपालीको एउटै आशा छ‑ सुरक्षित तरिकाले घर पुगियोस् ।
अमित संग्रौला, बिर्तामोड हाल दुबई
प्रकाशित समय ०८:४३ बजे
पछिल्लाे - गण्डकी प्रदेशमा थप १७ जनामा कोरोना संक्रमण, संख्या ९६६ पुग्यो
अघिल्लाे - हामीलाई बाँच्न देऊ सरकार ! (११ तस्बिरसहित)